प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण आजबाट « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 8 June, 2019 8:43 am
काठमाडौँ, २५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे युरोप भ्रमणका लागि शनिबार अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ । उक्त भ्रमण दुई पक्षीय हितमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्नुहुँदै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले बेलायत, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्ससँगको सम्बन्धका आधार र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।